waa maxay USB3.1 HUB? | Huachuang Elektaroonig ah
Soo ogow wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan USB-C hubs iyo USB 3.1 hub halkan. Waa maxay farqadu? Ma jiraan wax kala soocid ah? USB Type-C waa qaab isku xiraha oo la soo saaray 2015. Nooca isku xirka A, oo inbadan caan ahaa, waa in lagu bedelaa nooca "C". Xirmooyinkan ayaa ah kuwa ka yar oo laga adeegsan karo labada dhinac - taas oo ah malaha faa iidada ugu weyn. Weligaa ha fiirsan sida furfuranka loo geliyo dekada - kaliya geli!
Soo Koobid Faa'iidooyinka USB 3.1
laba jeer ka dhakhso badan sida USB 3.0
20x ka dhakhso badan USB 2.0
hoos ugudambeeya USB USB & aaladda USB 2.0
gudbinta koronto badan (900 mA) - buugaagta xasuusta ayaa la dallaci karaa
Maxaad sameyneysaa haddii Mac ama laptopka cusub uu leeyahay nooca "USB C" isku xiraha, laakiin aaladaha dhammaan dhamaadka wali waa USB 2.0 ama 3.0? Ama haddii ay jiraan siyaalo aad u tiro yar oo furfuran?
Xalka waxaa loo yaqaan USB-C Hub. Xarumaha USB-ka waa ikhtiyaar fiican oo loo adeegsado dekada USB 3.1 ee ku yaal Mac oo leh noocyada USB ee duugga ah. Waxyaabaha soo socdaa halkan ayaa lagu dabaqayaa: marka la soo gaabiyo fiilada xargaha xudunta ah iyo isku xirnaanta xirmooyinka ay ku yaryihiin, ayaa waxqabadka sifiican u roon. Khubaradu waxay haddaba kugula talinayaan inaad isku xidho dhawr xarumood oo isku xigta halkii aad ka isticmaali lahayd hub leh goobo badan oo godad leh. Xarkaha nooca USB 3 ee C 3.1 wuxuu awood u siinayaa iskuxirka aalado dhowr ah oo leh isku xirka USB 3.0 ama ka weyn xiriiriyaha USB Type-C ee Mac iyo kombuyuutar ama buugga xasuus-qorka. Aaladaha duugga ah waxaa lagu shaqeyn karaa xayndaabka noocaas ah, laakiin kaliya xawaaraha iyo xawaaraha loogu talagalay.
Kuxiraha USB-C ma ku habboon yahay kumbuyuutarkeygii hore?
Maya - gelinta USB-A ama USB-B (Micro-USB) lama jaan qaadi karo maxaa yeelay qaabka ayaa gebi ahaanba ka duwan.
Miyuusiggii USB-A ee hore miyaa ku habboon aaladda USB-C ee cusub?
Maya - gelinta USB-C aad bey u yar tahay.
Miyay micro-USB iyo USB-C isku xirnaadaan?
Maya - qaababka iskuxiraha way kala duwan yihiin.
Aaladda USB 2.0 ee duugga ah laguma dadajin karo iyadoo lagu adeegsanayo xarun 3.1 oo casri ah. Sababtoo ah biriiga ayaa ah isweydaarsiga aan laheyn xiriirada lagama maarmaanka u ah inuu gaaro SuperSpeed ​​+ halkaan. Sida kala guurka USB ka USB ilaa USB 3.0, USB 3.0 ilaa USB 3.1 gadaal gadaal ayey u jaan qaadayaan. Waxay qaadan doontaa inyar kahor inta aan la dejin heerka USB-C ee loo adeegsado MacBooks isla markaana adeegsadayaashu ay samayn karaan adigoon la istcimin karin. Waa wax la wada fahmi karo in aaladaha horay loo soo iibsaday wali in la isticmaalo.
Xarumaha hadda USB C
HuaChuang USB 3.1 Nooca C USB Hub
Laga soo bilaabo USB 1.0 illaa USB 3.1 - horumarka joogtada ah
Universal Serial Bus (USB) wuxuu u dejiyay laftiisa heer astaamihiisu sareyso asalkiisuna dib ayuu u soo laabanayaa waqti dheer teknoolojiyadda kumbuyuutarka. Sannadkii 1996kii, nooca asalka ah ee 1.0 waxay suurtogal ka dhigtay in lagu xiro aalado dhowr ah, sida daabacadaha, diskooga ama sheybaaro, iyada oo loo marayo istiraatiijiyad isku mid ah iyada oo aan loo baahnayn in la rakibo kaadh koronto oo qaali ah waqtigaas ama aan iibsan wax u dhigma aaladaha dhamaadka. Nooca asalka ah wuxuu suurta geliyey heerka wareejinta illaa 1.5 ama 12 MB / labaad. Nooca 2.0 oo leh magaca 'Hi-Speed' wuxuu keenay awood wareejin xog ah oo ah 60 MB / labaad sanadkii 2000. Heerka USB 3.0, sideed sano kadib, wuxuu ugu magac daray SuperSpeed ​​kororka xawaaraha wareejinta 500 MB / labaad.
Qalabka USB-ga cusubi ma la shaqeeyaa mid duug ah?
Waxayaabaha fiican ee horay u socda: aaladda USB 2.0 aaladaha sidoo kale dhamaantood waxaa lagu shaqeyn karaa USB 3.0 bareesyada. Taas macnaheedu waa in, tusaale ahaan, ul xusuus leh oo leh USB USB deked ah sidoo kale lagu shaqeyn karaa kumbuyuutarka USB 3.0 - si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaatooyin la xiriira micro USB isku xirka 3.0, maadaama ay waxyar ka ballaaran tahay oo ay ku leedahay saxanka hagaha. . Sida USB 2.0, USB 3.0 wuxuu ku saleysan yahay xawaaraha qalabka ugu liita. Si kastaba ha noqotee, bareesooyinka USB 2.0 baalashooda ma aqbalaan USB 3.0 bareesyada - tan waxaa ugu wacan xiriirada.
Marka la soo koobo, tan macnaheedu waa:
Xarkaha USB 3.0 USB gadaal kama laaban karo ee la xiriira aaladaha dhamaadka
USB 3.0 fiilooyinku waxay kuxiran karaan aaladda USB 3.0 aaladda USB 2.0
Xargaha USB 3.0 kuma xiri karaan qalabka USB 2.0 aaladda USB 2.0
Xargaha USB 3.0 kuma xiri karaan qalabka USB 2.0 aaladda USB 3.0
USB 2.0 fiilooyinku waxay kuxiran karaan aaladda USB 2.0 aaladda USB 3.0
Xargaha USB 2.0 kuma xiri karaan aaladda USB 3.0 aaladda USB 3.0
Xargaha USB 2.0 kuma xiri karaan aaladda USB 3.0 aaladda USB 2.0
USB 3.1 caadiga ah iyo isku xirka USB Type-C cusub
Awoodda is-waafajinta, fiilada iyo xargaha isku xirka - Hadda heerka USB 3.1 waa inuu bixiyaa sawir cad. Isbeddelka ka socda USB 3.0 illaa USB 3.1, fiilo cusub oo isku xira ayaa lagu soo bandhigay heerka USB-ga cusub: iskuxirka nooca C wuxuu bedelayaa nooca caadiga ah ee A waxaana sidoo kale lagu dhejin karaa labada dhinac. Waxay kaloo bixisaa xawaare sare oo gudbinta ah. Ayadoo la kaashanayo xarunta USB, aaladda USB 2.0 ee la shaqeysa nooca xiriiriyaha A sidoo kale waxaa loo adeegsan karaa isku xirka USB 3.1 ee isku xirka nooca C iyo midka kale. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhibaatooyin la xiriira sahayda korantada markii ay ku xirmaan aaladda USB 3.0 iyo 3.1 aaladaha USB 2.0 dekedaha, maadaama USB 3.0 uu hadda kordhay kan hadda ah 500 mA illaa 900 mA. Labka isku xidha USB-C sidoo kale aad ayuu uga yar yahay kii ka horeeyey Nooca A. Jiritaankiisu waa in ka badan 10.
Apple waxay ku beddelaysaa barnaamijka 'Thunderbolt interface' USB Type-C
Dekadda Thunderbolt oo ay si wada jir ah u soo saareen Apple iyo Intel, oo inta badan loo adeegsaday Apple Macs, ayaa lagu beddelay Sannadkii 2015-kii oo lagu beddelay nooca "C" oo leh USB 3.1. Istaraatiijiyadan waxaa sidoo kale macquul ah in lagu xiro shaashad. Xallinta shaashadda illaa 5k wax dhibaato ah kuma leh xiriiriyaha. Wali ma cada in nooca isku xiraha nooca "USB" uu la mid yahay midka caadiga ah ee USB 3.1 uu dhab ahaantii noqon doono midka caanka ah ee ku dallaca qaaradda Yurub. Bishii Maarj 2014, baarlamaanka Yurub wuxuu meel mariyey sharci bixin doona fiilo koronto oo caadi ah oo loogu talagalay aaladaha mobilada laga soo bilaabo 2017. Ilaa iyo markaa, heshiiska ku saabsan heerarka korantada isku midka ah waa ikhtiyaari - halkan dhamaan soosaarayaasha, marka laga reebo Apple, taasi waa ta kaliya. Shirkadda leh xargaha hillaaca ee aan raacin heer kasta oo karinaya maraq u gaar ah. Iskeed, isku xirka USB Type C ee leh USB 3.1 wuxuu leeyahay fursad wanaagsan oo isagu iskiis u dejiyo sida heerarka cusub maxaa yeelay xiriiriyaha yar wuxuu u oggolaanayaa isku xirnaanta cidhiidhi ah aaladda qalabka xawaaraha gudbinta si weyn ayaa loo wanaajiyay. Intaa waxaa u dheer, isku xirka Nooca C wuxuu yareeyaa xarkaha fiilada USB, maadaama uu badali karo dhammaan noocyada isku xirka USB ee hore ma ahan oo keliya xawaaraha isku xirka, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay 900 mAh.